China YF-T10 Zava-mahadomelina makiazy lehibe miaraka amin'ny talantalana fitehirizana sy mpanamboatra vatasarihana | Yifan
ZF-T10 Zava-bolo makiazy lehibe miaraka amin'ny talantalana sy vatasarihana fitehirizana
Ireo fanaka amin'ny efitrano fatoriana avy any Italia, dia fanangonana matevina, kalitao avo lenta ao an-tranon'ny fandriana, tratra vatasarihana ary latabatra fisoloana akanjo amin'ny safidy isan-karazany amin'ny habe samihafa.
tsy misy YF-T10
TOETOETRA Fitehirizana, vatasarihana, fitaratra azo esorina
KEVITRA Birao MDF gloss avo + tongotra vy tsy misy fangarony
DIMENSION TABLE 1200 * 500 * 750mm
Ity vanity mahafatifaty tsara tarehy ity dia manana endrika mahafinaritra miaraka amin'ny tanany miavaka amin'ny vatasarihana. Ny loko beige dia mitazona azy ho madio sy malalaka. Ny mpamadika dia manana vatasarihana efatra. Ny seza dia misy seza, fitaratra ary zava-poana.
Ny latabatra fiakanjo an-tsehatra dia misy boatin-vatasarihana mpantsaka 3 misy tontonana 7cm ambony, fototra ary sisiny. Ny ambony sy ny tratra dia misy amin'ny sakany maro, saingy iray ihany ny haavony.
Fanatobiana lehibe: vatasarihana 4 manome anao toerana fitahirizana sahaza handaminana ny firavakao, kojakojam-bolo, hiran'ny fantsika, vokatra fikolokoloana volo ary kosmetika.
Fampiasana marobe: Tsy latabatra fisoloana akanjo fotsiny izy io mba hanomezana toerana mety hipetrahana hanaovana ny volonao sy ny makiazy anao, fa azo ampiasaina ho latabatra fandalinana na birao rehefa mamindra ny fitaratra.
Ity latabatra fiakanjoana zava-poana ity dia fanomezana mahafinaritra ho an'ny zazavavy. Ny endrika kanto sy tsara tarehy miaraka amin'ny endriny voasokitra dia ho lasa haingo lavorary. Ny takelaka malalaka sy ny vatasarihana anaty 4 dia manome toerana fitahirizana be dia be hanampiana anao handamina ny firavakao, ny hatsaran-tarehy ary ny kojakoja ilaina. Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka an'io latabatra fiakanjoana io dia ny manana fitaratra mihodina 360 ° izay manome fomba fijery feno hahafahanao mahazo antoka fa tsara tarehy ianao isaky ny zoro. Azonao atao ny mampiasa azy io ho toy ny latabatra fitafiana sy fametahana birao fanoratana.
FAMPIANARANA TABLE ： 1200 * 500 * 750mm
STYLE: Volavola tsara tarehy sy maoderina sy maoderina, fisehoana fotsy mirenty ary fananganana modely maoderina, fomba an-trano mahazatra izay manazava ny lafiny hafa amin'ny fiainanao
MATERIAL: Fotsy + fanontana volamena Tongotra vy tsy voatanisa Fitaovana: Sombin-kazo kilasy E1 + endriny metaly mifono vovoka
Previous: Zoro YF-T8 feno latabatra fiakanjoana mihaja
Manaraka: YF-T11 velvet zava-poana
Fitaratra mihidy YF-T19 Black
Latabatra fanaovana endrika kanto sy kanto
YF-T7 Makeup Vanity LatabatraFitaratra lehibe & Ca ...
Kambana kely fisoloana akanjo latabatra Mini